Umahluko phakathi kokuphindaphindeka nokukhula okuphuculweyo kwi-agile
Eyona Agile Umahluko phakathi koPhuculo lwe-Iterative kunye neNkqubela kwi-Agile
Kuphuhliso lwesoftware e-agile, nguwuphi umahluko phakathi kokuphindaphindeka nokwandiswa kokukhula? Ngaba bayinto enye? Yintoni umahluko phakathi kwala magama mabini?
Okokuqala, masiqwalasele iinkcazo ezilula zala magama mabini:
Ukwanda - ukongeza ukusebenza okutsha kwiichunks ezincinci
Ukuphinda - ukwenza ngokuphindaphindiweyo, okt ukongeza ukusebenza okutsha ngendlela ephindaphindayo okanye ejikelezayo
Ukusuka I-Wikipedia :
Ukuphuhliswa kokuphindaphindwa kudalwe njengempendulo yokungasebenzi kakuhle kunye neengxaki ezifumaneka kwimpophoma.
Umbono osisiseko sale ndlela kukuphuhlisa inkqubo ngokusebenzisa imijikelezo ephindaphindwayo (iterative) kunye nezahlulo ezincinci ngexesha (eyandayo), evumela abaphuhlisi besoftware ukuba basebenzise oko bakufundileyo ngexesha lophuhliso lwamalungu angaphambili okanye iinguqulelo zenkqubo. Ukufunda kuvela kuphuhliso kunye nokusetyenziswa kwenkqubo, apho kunokwenzeka khona amanyathelo aphambili kwinkqubo aqala ngophumezo olulula lweseti yeemfuno zesoftware kunye nokwenza ngcono iinguqulelo eziguqukayo de kube kuphunyezwe inkqubo epheleleyo. Kwi-iteration nganye, uhlengahlengiso loyilo luyenziwa kunye namandla amatsha okusebenza ayongezwa.
Kuphuhliso olonyukayo, ukusebenza kwenkqubo kusikiwe kwinyuselo (izahlulo), apho kukonyuka ngalunye, isilayidi sokusebenza sihanjiswa.
Umbono uphela kukuhambisa uhlobo 'olusebenzayo' lwento (nangona incinci) kubasebenzisi ukuze sikwazi ukufumana ingxelo kwangoko kwinkqubo. Thelekisa loo nto kunye nokwakha indawo esebenzayo ngokupheleleyo kwiinyanga ezimbalwa, kuphela ukufumanisa ukuba oko kwakhiweyo akuhlangabezani neemfuno zabasebenzisi.
Ukuphuhliswa okwandayo kunye nokwanda
Makhe sibone umzekelo wendlela ukukhula kunye nokunyusa ukukhula kunye nokuhanjiswa kusebenza kwimeko ye-agile.
Masithi ufuna ukongeza ukusebenza kokungena kwiwebhusayithi, kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna ukuyiphuhlisa le ndlela usebenzisa i-agile methodology, usebenza kwimijikelo yokuhanjiswa kweeveki ezimbini (iterations).
Inkqubo ye- Ubuncinci Inguqulelo esebenzayo yokusebenza kokungena ekufanele ukuba uyihambise kubasebenzisi iya kuba
Yenza iphepha lewebhu apho abasebenzisi baya kubona ifom yokungena
Yongeza ifom yokungena ngamacandelo amabini kuphela (igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha) kunye neqhosha lokungena, okt nje ifom yesiqhelo ye-HTML ene hayi isitayile okanye ukungqinisisa
Yenza iphepha 'lokwamkela' xa abasebenzisi bengena, baya kubona umyalezo.
Olu luguqulelo lokuqala (olusebenzayo kodwa olunomda ekusebenzeni) lwesoftware ehanjiswe ngokwezibalo. Inqaku lokungena elisisiseko liye loyilo, uphuhliso, kunye nokuvavanywa kwaye kwahanjiswa ekupheleni kwenkqubo.
Kwi-iteration elandelayo, sifuna ukongeza ukusebenza kokungena kwento eyakhiwe kulwakhiwo lokugqibela. Sisenokugqiba kwelokuba sikwenze oko
Yakha imigaqo yokuqinisekisa ejikeleze iiparameter zokufaka
Yongeza i-CSS ukuze ifom yokungena ibonakale intle
Bonisa umyalezo xa umsebenzisi ezama ukungena kunye neenkcukacha ezingasebenziyo
Ngoku songeze ukusebenza okutsha okuphuculweyo. Ngamanye amagama, sinayo inyuswe ukusebenza kokungena okukhoyo, kwaye sikwenzile kule iteration.
Ukuphindaphinda kathathu, singaphinda sinyuse ukusebenza kwethu kokungena, ngokongeza
Umsebenzi wegama eligqityiweyo
Ibhokisi yokukhangela 'Ndikhumbule'
Ukuphinda uhlengahlengise indlela yokuhambisa kwakhona kumaphepha afanelekileyo xa abasebenzisi bangena (endaweni yokuba iphepha 'lamkelekile' eliphuhliswe kulwaziso lokuqala)
Njengoko ubona, kutyelelo ngalunye, sandise ukusebenza kokungena ngokongeza amanqaku amatsha abalulekileyo kubasebenzisi. Ngokwenza njalo, sinokufumana ingxelo ekhawulezayo evela kubasebenzisi ukuze sikwazi ukongeza okanye ukuphucula ukusebenza kwayo.
Ngaphezulu kwenani lokuphindaphindwa, ekugqibeleni sisa isisombululo esipheleleyo.
Iifowuni ezilungileyo kwimarike 2017
Umlo wexesha elizayo weMarvel ufumana uhlaziyo olukhulu lukaGqirha Strange
Uyenza njani i-ID ye-Apple ngaphandle kwekhadi letyala